Rugta Injineerinka farsamada si loo xakameeyo Basaska IETT | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara34 IstanbulRugta Injineerinka Farsamo si ay u Xakameeyaan Basaska IETT
14 / 02 / 2020 34 Istanbul, GUUD, WADADA, Nidaamyada Tire Wheels, Headline, Gobolka Marmara, Metrobus, TURKEY
Rugta injineerada farsamada gacanta si ay u kormeeraan basaska iett
IETT waxay heshiis la saxiixatay Rugta Injineeriyada farsamada gudaheeda iyada oo la fiirinayo baaxadda iyo kormeerka basaska. Sidan, jawaabaha su'aalahan waxaa hubin doona hay'ad madax-bannaan marka laga reebo kormeerayaasha IETT iyo shirkadaha qandaraasleyda dayactirka. Qaybta baska lagu beddelay runtii khalad ma ahayd? Beddelka qaybku ma cusbaa mid cusub iyo mid asal ah? ” Jawaabta ugu saxsan waxaa laga heli doonaa su'aalaha noocaas ah.
U adeegta 4 milyan oo rakaab ah maalin kasta, IETT waxay fulisaa howlo dayactir iyo dayactir 3 garaash ah oo ay wataan 65 kun iyo 11 bas. Iyada oo qayb ka ah heshiiska lala galay Rugta injineerinka farsamada, basaska waxaa kormeeri doona kooxaha Rugta, iyo sidoo kale kormeerka iyo kantaroolka shaqaalaha ka shaqeeya IETT.
Ujeedada qandaraaska loogu talagalay "Kormeerka Hawlaha Kormeerka Hawlaha Kormeerka iyo Dayactirka" ee ay wado laanta Istanbul ee Rugta injineeriyada farsamada injineerada ayaa ah in la bixiyo baaritaano madax banaan oo ah basaska IETT iyada oo loo marayo nidaam lagu magacaabo isha saddexaad. Haddii dayactirka gaariga iyo howlaha dayactirka ee garaashka lagu fuliyo iyadoo la tixraacayo shuruudaha farsamada ee la xiriira, heerarka tayada iyo shuruudaha ay go'aamisay maamulku si muuqata ayaa loo hubin doonaa.
SOCODKA ADEEGYADA wuu sii kordhayaa
Wakiilada Rugta ayaa la socon doona waxqabadka qandaraasleyaasha dayactirka, waxay diyaarin doonaan warbixinno waxayna cadeynayaan dhinacyada u furan hagaajinta, waxayna hubin doonaan in talaabooyinka lagama maarmaanka ah la qaado. Sidaas darteed, waxaa looga golleeyahay in lagu yareeyo khasaaraha duulimaadka sababo la xiriira baabuurta oo ku xumaata iyo kordhinta amniga rakaabka. Baadhitaano ayaa la rajaynayaa inay kordhiyaan qanacsanaanta rakaabka iyadoo la hagaajinayo tayada adeegga.
XIRFADAHA LAGU SAMEEYO LABADA LABAAD
kormeerka; farsamo iyo dabagal xisaab hubin ah ayaa lagu sameyn doonaa laba marxaladood. Baarayaasha farsamada, waxaa la hubin doonaa in howlaha dayactirka iyo dayactirka lagu fulinayo si waafaqsan shuruudaha farsamada. Xisaabaadka dabagalka; Waa la hubin doonaa haddii waxyaabaha aan rasmiga ahayn ee lagu arko baarista farsamada la tirtiro.
Machadyada Farsamaysan waxay tijaabiyeen Tramway Tramway Silkworm
Turkey Rail System Injineerro iyo Farsamayaqaano in aad ku buuxisid!